XZ420E HDD သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၏ထိရောက်မှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအလေ့အထ၊ စနစ်စွမ်းအင်ချွေတာမှုများနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဲ့သို့မြို့ပြပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်မှု၊ ကေဘယ်တီဗီနှင့်စသည်။
၁. လက်ကိုင်ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုရှေ့ပြေးစနစ်သည်စက်တစ်ခုလုံးအတွက်အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ညှိနှိုင်းမှုစွမ်းရည်ကိုပေးသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသောအမှတ်တံဆိပ်ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများသည်စက်တစ်ခုလုံး၏စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
၃. မြန်နှုန်းမြင့်လျှောစနစ်များ၊ မြင့်မားသောအနိမ့်လျှောစီးရထားမှုရရှိရန်ပစ္စတင်မော်တာ၊ စက်လည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း။
4. စက်တစ်ခုလုံးသည်အချိုးကျဝါယာကြိုးဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ထိုင်ခုံခလုတ်များ၊ ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကာကွယ်မှုနှင့်အချိန်တိုအတွင်းပေါင်း ၂၀% အင်အားစုတို့ကဲ့သို့သောကာကွယ်မှုနည်းပညာကို CE လုံခြုံရေးသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
အမြောက်အများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လှည့်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းစနစ်၊ မော်ဂျူလာဘုံရထားလမ်းလောင်စာစနစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ စနစ်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊
ဖောက်သည်များ၏မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များကိုကူညီပံ့ပိုးရန်၊ စက်ကိုတက္ကစီ၊ လေအေးပေးစက်၊ အအေး၊ ဖုန်မှုန့်အေးစေခြင်း၊ အလိုအလျောက်တင်လှံတံ၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကာကွယ်မှုအလိုအလျောက်ချည်မျှင်ဆီစက်စသည်တို့ဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
XZ420E HDD မိတ်ဆက်ခြင်း
အင်ဂျင်တရုတ် - ၃ တွင်ရှိသောအဆင့် ၃
400L L ရွှံ့စုပ်စက် 400L ရွှံ့စုပ်စက်
450L L ရွှံ့စုပ်စက် 450L ရွှံ့စုပ်စက်
ပိုက် Loader ကို
Semi-အော်တိုကိုင်တွယ်သည့်စက်များ၏ Semi-automatic pipeloader
အလိုအလျောက်တင်အပြည့်အဝ - အလိုအလျောက် pipeloader
တက္ကစီ (အအေးနှင့်အပူ) Cab နှင့်လေအေးပေးစက်
အချိုးကျဝါယာကြိုး -controlled လမ်းလျှောက်,
အချိန်တို Plus အား 20% အင်အား
အလိုအလျောက်ချည်ရေနံလျှောက်ထားပါ အလိုအလျောက်ချည်ရေနံ daub
တွန်းကန်အား - ဆွဲ Pump
တွန်းကန်အား - ဆွဲမော်တာ
ထုပ်ပိုးစာရင်းနှင့်အတူလိုက်တဲ့အခါ XZ420E HDD စက်စက်ကိုစတင်အောက်ပါနည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည်:
ကုန်ပစ္စည်းလက်မှတ် / ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲ / အင်ဂျင်အသေးစိတ် / အင်ဂျင်အာမခံ / ရွှံ့စုပ်စက်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ
ရှေ့သို့ XZ400 အလျားလိုက်ဒေါင်လိုက်လမ်းညွှန်တူးစင်
နောက်တစ်ခု: XZ450Plus အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
XZ1350 အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
hdd တူးဖော်ခြင်းစက်, အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်, ကျင်းပေါက်တူးစက်, hdd တူးစင်,